कसरी अर्बौं डलर कमाउँछन् यी दिग्गज कम्पनीहरु ? - eNepalikhabar.com
गृह कसरी अर्बौं डलर कमाउँछन् यी दिग्गज कम्पनीहरु ?
· गुगल : गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटको राजश्वको सबैभन्दा ठूलो अंश अर्थात् ८८ प्रतिशत गुगलको विज्ञापन तथा यू ट्युबबाट आउने गरेको छ । गुगल प्ले सर्भिस तथा पिक्सेलबाट थप ११ प्रतिशत राजश्व आउने गरेको छ ।· एप्पल : एप्पलको सबैभन्दा धेरै राजश्व आइफोनबाटै आउँछ । एप्पलको राजश्वको ६३ प्रतिशत हिस्सा आइफोन बिक्रीबाट उठ्ने गरेको छ । अन्य एसेसरिजबाट एप्पलले केवल कुल राजश्वको ५ प्रतिशत मात्र कमाउँदछ । बाँकी ११ प्रतिशत चाहीँ एप्पल म्युजिक, आइट्युन्स तथा आइक्लाउडबाट कमाउँछ ।
(0.017072 seconds )